Ny fialan-tsasatry ny ririnina any an-tendrombohitra dia fomba iray ahafahana miala sasatra, mialà amin'ny zava-manahirana isan'andro ary manamafy ny fahasalamanao. Ny fiantohana ny fialan-tsasatra mahomby dia fanomanana azy tsara. Mifidiana toeram-ponenana mifanaraka amin'ny fahaiza-manaony sy ny zavatra ilainy, satria ny fangatahan'ny mpitaingina mpihaza sy ny atleta manana traikefa nandritra ny taona maro, mazava ho azy, dia hafa. Ny safidy tsara indrindra ho an'ny ankamaroan'ny toeram-ponenan'ny bisikileta, izay ahafahanao mahita lalana tsara ho an'ny mpandray anjara, ary ho an'ny mpilalao mahay. Noho izany, tsara ny fitsangatsanganana toeram-pisakafoanana tahaka an'i Abzakovo.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny toerana misy an'i Abzakovo (toeram-pialan-tsasatra), ary momba ireo endri-pialam-boly ao amin'io toeran-kafa io.
Ny toeram-ponenana any Bashkiria , izay misy ny toeram-pialan-tsambo any Abzakovo, dia manintona ireo mpizahatany manana ny hakanton'ny tendrombohitra Ural, ny rivotra madio sy ny safidy maro samihafa ho an'ny fampisehoana fialantsasatra - avy amin'ny "kamo" hatramin'ny faramparany.
Ny tanàna dia eo anelanelan'ny renirano Maly Kizil, akaikin'ny alan'i Kyrty. Abzakovo dia voahodidina tendrombohitra, indrindra fa Halmaurdi sy Bikembet no akaiky azy. Tsy lavitra ny tanàna, any amin'ny ilany atsinanan'ny tendrombohitra, misy lakandranon'ny farihy. Ny halavirana mankany amin'ny foibem-paritra (Beloretsk) dia manodidina ny 20 km.
Ny fiantsonan'ny fiarandalamby Novoabzakovo dia eo atsimo-atsinanan'i Abzakovo. Ny halavirana eo aminy dia manodidina ny 5 km.
Infrastruktur sy fialam-boly Abzakovo
Ny fametrahana any Abzakovo dia azo atao any amin'ny trano fandraisam-bahiny sy trano fisakafoana isan-karazany. Ao an-tanàna ihany koa ny tobim-pahasalaman'ny ankizy, sanatoriums.
Tsy ny mpankafy ski sy ny snowboarding fotsiny ihany no hitsidihana an'i Abzakovo, fa amin'ny alalan'ny bisikileta, moto mpanamory fiaramanidina, ary koa mpankafy ny fanatanjahantena. Ary mbola, ny skiing dia faritra manan-danja amin'ny toeram-ponenana. Ny fizaran-taona any Abzakovo dia maharitra hatramin'ny Novambra ka hatramin'ny volana May.
Ny fahasamihafana eo amin'ny haavony dia maherin'ny 300 m, ary ny ankamaroan'ny tendrombohitra dia mamakivaky ny faritra rakotra ala. Misy slalom sy lala-mitongilana goavam-be. Indroa isan-kerinandro dia misy fialantsasatra amin'ny hariva amin'ny làlam-pahazavana.
Hatramin'ny vao haingana, dia tsy ampy ny fiakarana an-kalamanjana tao amin'ilay faritra, ary ny kalitaon'ny làlana dia nandao be dia be. Saingy mihamitombo ny fiantraikan'ny fananganana toeram-panorenana any Abzakovo sy ny manodidina.
Androany, ny tanàna dia manana ny zavatra rehetra ilainao amin'ny fialan-tsasatra: fivarotana, toeram-pitsaboana, fitaovana sy trano fisakafoanana, trano fisakafoanana, buffets, cafes, trano fisakafoanana, efitrano entana, fiara.
Ny toerana akaikin'ny làlambe lehibe dia mahatonga ny fizahantany tsy miankina amin'i Abzakovo olana tsy misy olana. Amin'ny ankapobeny, i Abzakovo dia mety antsoina hoe iray amin'ireo toeram-piompiana maoderina indrindra sy mendrika indrindra any Rosia . Manamafy ny sata avo sy ny fitsidihana tsy tapaka any Abzakovo amin'ny atleta ambony.
Ny toeram-pialan-tsasatra Abzakovo any Baskaria dia tsara tarehy tsy amin'ny ririnina, fa amin'ny fahavaratra koa. Azonao atao ny manamarina izany amin'ny fijerena sary ao amin'ny galitrisantsika.
Ny toerana mahatsiravina indrindra eto an-tany
Zakynthos - manintona
Inona no havoakan'ny Repoblika Dominikanina?
Fitsipika momba ny fitaterana ankizy amin'ny bus
Zavatra mahaliana momba an'i Italia
Aquapark ao Chelyabinsk
Boeing 737 500 - drafitra anatiny
Tendrombohitra Azov ranomasina
Tanànana voarara tany Beijing
Bucarest - toetoetran'ny mpizahatany
Medaly ny voanio
Ny fahitalavitra dia miorina amin'ny fomba tsotra
Fàfana ho an'ny lakozia amin'ny tanan'ny tanana
Toeram-pandriana, kofehy - fanamboamboarana
Thai cats - famaritana ny zaridaina, ny toetra
Nahoana no manakorontana ny oroko?
Ny oscillococcinum dia analogique
Ny fitsangatsanganana ara-tsakafo: ny sakafo mahasalama indrindra amin'ny sekoly
Ireo sary 35 izay hahatonga ny mpanimba ho tonga lafatra amin'ny fahafinaretana
Tatyanka akanjo miaraka amin'ny vala
Inona no omena raozy mavo?
Models of hats
Nicole Kidman sy Reese Witherspoon dia hilalao amin'ny vanim-potoana faharoa amin'ny andiany "Big Little Lies"
Ny tsy fahampian'ny sakafo amin'ny ankizy
Ny soritr'aretin'ny microinsult, ny famantarana voalohany amin'ny vehivavy
Ilay Andriamanitra Jiosy
Ny vahaolana infusion vaovao
Nahoana ny vavony no mialoha ny vanim-potoanan'ny ratra?
Ahoana no hanapahana heniry maniry amin'ny fararano?